"Ọ bụ ihu Padre Pio", anyị na-eti mkpu na ọrụ ebube | Blọọgụ nke ekpere
"Ọ bụ ihu Padre Pio", ọ tiri mkpu ọrụ ebube ahụ
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 16, 2020 Maggio 16, 2020
Enwere okwu banyere mpụta dị egwu na Ginestra degli Schiavoni, obere obodo dị na mpaghara Benevento, ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-ahụ ihu San Pio na ọnụ ụzọ ochie ụlọ nke ụlọ dị na ebe akụkọ ihe mere eme, mita ole na ole site na ihe oyiyi nke friar Pietrelcina.
Ozi a gbasaruru ngwa ngwa n’obodo ahụ na n’obodo ndị dị nso na Fortore. Ebe ahụ ghọrọ ngwa ngwa njem ndị njem. Onye isi obodo ahụ, Zaccaria Spina, ghapụrụ ọnụnọ na oghere dị n'ihu ụlọ ahụ.
Nwa amaala nke mbu n’onwe ya kwuru, sị: "Being nọrọ nso n'ọnụ ụzọ, ị hụghị ihe ọ bụla, kama pụọ ​​na ebe a ihu San Sanio ihu pụtara." N'oge a "Enweghị nkọwa" na nnukwu ịdọ aka ná ntị n'okwu ahụ site n'aka ndị isi ụka.
isi mmalite: teleclubitalia.it
← Na post gara aga Gara aga post:Iso Christianityzọ Kraịst bụ mmekọrịta, ọ bụghị usoro nke iwu, ka Pope Francis na-ekwu
Ọzọ Post → Post ozo:You mara ụzọ kachasị mfe n’ekpere?